२०२१ को लागि डिभी खुल्यो, अब पासपार्ट चाहिने (भर्ने तरिकासहित) | Kendrabindu Nepal Online News
२०२१ को लागि डिभी खुल्यो, अब पासपार्ट चाहिने (भर्ने तरिकासहित)
काठमाडौं । सन् २०२१ को लागि ई-डिभी को लागि आवेदन खुला भएको छ । अमेरिकाले २०१९ अगष्ट २ देखि नोभेम्बर ५ सम्म अनलाइनमार्फत आवेदन खुल्ला गरेको हो ।
अमेरिकाको आप्रवासी ऐन (इमिग्रेसन एण्ड नेशनालिटी एक्ट) को व्यवस्था अनुसार ई-डिभीमार्फत यस वर्ष ५५ हजारका लागि भिसा उपलब्ध गराउने सूचनामा जनाइएको छ। डिभी भरेवापत कुनै शुल्क लाग्ने छैन। अमेरिकामा कम आप्रवासी भएका मुलुकका नागरिकलाई अमेरिकाले चिठ्ठामार्फत भिसा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
अघिल्ला वर्षका शर्त यथावत राख्दै यसपटक अमेरिकाले यस पटकबाट डिभी भर्नका लागि पासपोर्ट नम्बर चाहिने नयाँ व्यवस्था गरेको छ।
साथै जारी गरिएको देश र पासपोर्टको म्याद अवधि पनि उल्लेख गर्नु पर्नेछ। तर डिपेन्टेन्टमा जानेका लागि भने यो आवश्यक छैन । यसैगरी कम्युनिस्ट देशका नागरिक र देशविहीनहरूका लागि पनि इन्टरनेशनल ट्राभल पासपोर्ट नम्बर नचाहिने सूचनामा उल्लेख छ।
फर्म भर्ने अवधिमा www.dvlottery.state.gov मा गई ई-डिभीको आवेदन फारम भर्नु पर्नेछ । आवेदनमा आफ्ना पति/पत्‍नी र आवेदनको समयमा २१ वर्ष नपुगेका सबै अविवाहित सन्तानको विवरण राख्नुपर्छ। पहिलो पटक डिभी भर्दा पासपोर्ट नम्बर चाहिने नयाँ व्यवस्था गरेको छ।
फर्म भर्दा फोटो भने हालसालै खिचिएको हुनुपर्ने छ अघिल्लो वर्षको डि.भी. आवेदनमा प्रयोग गरिएको फोटो यस वर्षको आवेदनमा प्रयोग गरेमा अयोग्य ठहरिनेछ । सबै विवरणसहित फर्म भरेर सबमीट गरिसकेपछि कन्फर्मेसन नम्बरसहितको पत्र प्रिण्ट गर्नुपर्छ जसको आधारमा डिभी परेनपरेको थाहा पाउने माध्यम हो।
डि.भी. का लागि छनोटमा परे/नपरेको थाहा पाउनको लागि कुनै फोन र इमेल नआउने र त्यस्ता हल्लाका पछाडि नलाग्न अमेरिकी सरकारले सचेत गराउँदै आएको छ ।
भारत र पाकिस्तानसहित १७ देशका नागरिकले भर्न नपाउनेः
भारत, पाकिस्तान, बंगलादेशसहित १७ देशका नागरिकहरुले भने डीभीको फारम भर्न पाउने छैनन् । डीभीको आवेदन दिन नपाउने देशहरुमा चीन (मुख्य भूमिमा जन्मिएका), ब्राजिल, क्यानडा, कोलम्बिया, डोमिनिक रिपब्लिक, एल साल्भाडोर, ग्वाटेमाला, जमैका, मेक्सिको, नाइजेरिया, फिलिपिन्स, दक्षिण कोरिया, बेलायत (उत्तरी आयरल्याण्ड बाहेक) र भियतनाम छन् ।
DV, DV 2021, ई-डिभी, डिभी
Prevबुबाको बलात्कार प्रकरणमा कृष्णबहादुर महरा पुत्रले दिए यस्तो प्रतिक्रिया
बसको ढोका थुनेर युवतीमाथि सामूहिक बलात्कार, चार जना पक्राउNext
‘डीभी’ ‘पीआर’ को फारम भर्ने शिक्षक-कर्मचारी बर्खास्त गरिने